I-Israel iseta umkhwa omtsha othusayo wokuvala ukhenketho lwabahambi abagonyelweyo |
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » I-Israel ziindaba zokuhamba » I-Israel icwangcisa umkhwa omtsha othusayo wokuvala ukhenketho kubahambi abagonyiweyo
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • I-Israel ziindaba zokuhamba • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Safety • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba eziShukumayo
I-Israel icwangcisa umkhwa omtsha othusayo wokuvala ukhenketho kubahambi abagonyiweyo
U-Israyeli ubeka umkhwa omtsha othusayo
U-Israel uphantse wagonywa ngokupheleleyo. Ukhenketho lwaMazwe ngaMazwe lwaluza kuqala ngoJulayi 1. Ukufumanisa okutsha okunxulumene nobungozi beDelta yentsholongwane ye-COVID kubangela ilizwe lamaJuda ukuba lirhoxise usuku lokuvulwa kwabakhenkethi bamazwe aphesheya lokundwendwela u-Israyeli.
Iindiza ezisuka e-US ziye kwa-Israyeli zibhukishwe ngokuqinileyo ngoJulayi. Iihotele eziseTel Aviv naseJerusalem okokuqala zinamazinga aphezulu okubhukisha kunye nabakhenkethi ekulindeleke ukuba bafike bevela eMelika.
I-Israel yenza izibhengezo ezinkulu zibhiyozela ukuvulwa kwelizwe lamaJuda kwezokhenketho kubatyeleli abagonyelweyo. Oku kubangele ukwaziswa okufanayo ngamanye amazwe.
Namhlanje, i-Israel Media inika ingxelo yokuba ugonyo lwabakhenkethi bamanye amazwe abayi kuvunyelwa ukuba bangene kwa-Israyeli ngaphambi kuka-Agasti 1. Ukufunyanwa okutsha ngokubhekisele kwiyantlukwano eyingozi ye-Delta yokulibaziseka kokuvulwa kwelizwe. Oku kunokubangela imeko kwezinye iindawo zehlabathi.
Urhulumente we-Nkulumbuso yase-Israeli u-Naftali Bennett uthathe isigqibo namhlanje, ngolwe-Lwesithathu, ngelixa u-Israyeli ejongene nokunyuka kwamatyala e-coronavirus ukutshintsha indlela yokuvula kwakhona ilizwe. Ukongeza, uxanduva lokunxiba iimaski ngaphakathi luya kubuyiselwa kwimeko ukuba i-avareji yamatyala emihla ngemihla aya kudlula kwi-100 ngeveki.
"Iinjongo zethu okwangoku, okokuqala nokuphambili, kukukhusela abemi bakwa-Israyeli kukhetho oluse-Delta olugqugqisileyo emhlabeni," utshilo uBennett kwimithombo yeendaba yalapha. Kwangelo xesha, sifuna ukunciphisa ukuphazamiseka kubomi bemihla ngemihla elizweni. Ke ngoko, sithathe isigqibo sokuthatha amanyathelo kwangoko - ngoku - ukuze singabhatali ixabiso elinzima kamva, ngokuthatha amanyathelo anoxanduva kunye nokukhawuleza. Kuxhomekeke kuthi. Ukuba siyayithobela imithetho kwaye senze ngokufanelekileyo, siza kuphumelela kunye. ”
Abakhenkethi abagonyiweyo ekuqaleni babemele ukuvunyelwa bangene kwilizwe ukuqala ngoJulayi 1. Oku kwabhengezwa kwi a Isicwangciso sokwakha kwakhona ukhenketho.
Kwiintsuku zakutshanje, ilizwe liye lahlaselwa yi-Delta, okwenza ukwanda kwezifo kwiidolophu ezifana neModi'in neBinyamina.
Isigqibo sabasemagunyeni bakwa-Israeli abaziwayo ukubeka ukhuseleko lwabemi baso rhoqo kuqala kunokubangela imeko kwezinye iindawo zokhenketho kwihlabathi liphela. Inokonyusa izithintelo ekufikeni kwabakhenkethi, ngaphandle kokucinga ukuba ugonyo yeyona nto iphambili kushishino lokhenketho.
Kukho iimeko ezingama-554 ezisebenzayo kweli lizwe. Kutshanje eli nani liye lehla laya kutsho ngaphantsi kwama-200. Kwingxelo yalo ebusika obuphelileyo, eli nani lalingaphezu kwama-85,000.
Ukulandela uqhambuko lwangoku kunye nengcebiso entsha ngabasemagunyeni yokugonya bonke abantwana abaneminyaka eyi-12-15, ngaphezulu kwe-7,000 yenziwa ngo-Lwesibini, eyona iphezulu kwisithuba senyanga. Ezinye ze-4,000 zazo yayizidosi zokuqala kubantwana, malunga nesixa esiphindwe kabini kwinani leentsuku ezidlulileyo.
Ukujongana nokuqhambuka okutsha, urhulumente uthathe isigqibo sokuseka ikhabhinethi entsha ye-coronavirus kubandakanya u-Bennett, Umphathiswa Wezempilo u-Nitzan Horowitz, Umphathiswa Wezangaphandle u-Yair Lapid, Umphathiswa Wezomkhosi u-Benny Gantz, Umphathiswa Wezemali u-Avigdor Liberman, Umphathiswa Wezobulungisa u-Gideon Sa'ar, kunye no-Ayelet Shaked , kunye nabanye abaphathiswa.
Kwangoko ngemini, iSebe lezeMpilo labhengeza ukuba kwiimeko ezithile, abantu abagonyiweyo okanye abafunyenwe banokuyalelwa ukuba bangene bodwa.
Ngokwemigaqo yangoku, abantu abathathelwa ingqalelo yokuba bagonywe ngokupheleleyo (kwiveki emva kokudutyulwa okwesibini okanye emva kokuba bachache kwesi sifo) bayakhululwa ekuhlukanisweni xa benokudibana nomntu ophethe intsholongwane.
Nangona kunjalo, ngokomyalelo omtsha otyikitywe ngumlawuli-Jikelele wenkonzo u-Chezy Levy, umlawuli-jikelele, ugqirha wesithili, okanye intloko yeeNkonzo zeMpilo zikaRhulumente baya kuba nakho ukufuna ukuba aba bantu bazikhethele ukuba banxibelelana nomntu osulelekileyo Umahluko kwintsholongwane ethathelwa ingqalelo iyingozi ngakumbi okanye isiganeko esineziphumo ezibi kakhulu zokugula. Kananjalo banokufuna ukwahlulwa ukuba bahlala benxibelelana nabemi abasemngciphekweni omkhulu okanye abangagonywanga, okanye ukuba babhabha kule moya inye ephethe i-coronavirus carrier echongiweyo. isikhululo seenqwelomoya nakwizibonelelo zonyango.
Umphathiswa uqinisekisile ukuba imiba yokutya kwisakhiwo seBen-Gurion kwisikhululo senqwelomoya - esithe ngolwesiHlanu sabangela ukuba abakhweli abangenayo abangama-2,800 XNUMX bagoduke bengakhange bavavanywe, njengoko kufunekayo kubo bonke abo bahlala kwa-Israyeli - zisonjululwe, kwaye nokunyanzeliswa yemigaqo yokuhamba ikwinkqubo yokunyuswa.
Abantu bakwa-Israyeli abaya kumazwe aphantsi kokuvalwa kokuhamba-ngeli xesha i-Argentina, iBrazil, i-India, i-Russia kunye noMzantsi Afrika-ngaphandle kokufumana imvume kwikomiti ekhethekileyo yaseburhulumenteni ebekelwe le njongo, ngoku baya kuhlawuliswa.
Olunye uhlaziyo kwi https://israel.travel/